नीजि बिद्यालय सरकारी बिद्यालयमा गाभियो – Saurahaonline.com
महोत्तरी, ६ भदौँ । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगर पालिका वडा नम्बर ०८ हात्तिलेटमा रहेको मोडेल इङलिस बोर्डिङ स्कुल सरकारी बिद्यालयमा गाभिएको छ ।
शिक्षा,बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समायोजन कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैं सरकारी र नीजि स्कुल बिचको एउटा ठुलो खाडल मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो ।
नीजि स्कुलको पढाई राम्रो छ भन्ने आम मानिसमा परेको छ, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, सार्वजानिक शिक्षा कमजोर भएको र सरकारी स्कुल अथवा सामुदायिक स्कुलको पढाई कमजोर भएको कुराले मलाई एकदमैं धेरैं पिडा भएको छ । नेपालको शिक्षाको कोणबाट हेर्दा शहर र गाँउ बिचको एकदमैं ठुलो अन्तर अर्को समस्या हो उहाँले भन्नुभयो, सबैंका लागि शिक्षा भन्ने नारा दिएको धेरैं बर्ष भयो ।
शहरमा जुन शिक्षा एउटा नागरिकले पाउँछ त्यही शिक्षा गाँउका नागरिकले पाउन सकेको छैंन । मन्त्री पोखरेलले हुनेखाने हरु र नहुने बिचको खाडल पनि शिक्षाको अर्को समस्या भएको भन्दैं देशका सबैं ठाँउमा सबै आम जनताले एकै खालको शिक्षा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
हामी शिक्षा अधिकारका लागि लडेका मान्छे, हामी समानताको लागि लडेका मान्छे, हामी जनवादी शिक्षाका लागि लडेका मान्छे, हामी समाजवाद तिर लैंजाने शिक्षाको लागि लडेका मान्छे मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, अहिले यो नेतृत्वमा बसेर यो समस्यालाई हेरिरहँदा र यस्लाई समाधान गर्ने दिशामा पहल गरिरहँदा यि सामान्य खालका समस्या छैंनन्, ठुला ठुला पहाडजस्ता समस्या छन् ।
हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न नीति, ऐन नियम कानुन र संरचनाहरु बनाउने प्रक्रियामा छौं । मन्त्री पोखरेलले यो बर्ष शिक्षाको एउटा दिशाबोध गर्ने परिवर्तनको नयाँ यात्रा तर्फ अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, शिक्षाको समस्या महाभारत छन् । समाधान गर्न निरन्तर लागिरहेका छौं ।
बर्दिबासको हात्तिलेटमा एउटा नीजि र अर्को सामुदायिक दुई वटा स्कुल मिलाएर नयाँ ढंगले लाने अभियान शुरु हुनु सुखद कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयोः यो प्रगशिल कुरा हो । सकारात्मक कुरा हो । नीजि र सरकारी बिद्यालय समायोजन के कसरी गर्ने भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले ठोस कार्य योजना नबनाएको भएपनि यो अनिवार्य आवश्यकता भईसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तिन पि अर्थात पब्लिक, प्राईभेट पाट्नरसिप मोडेल छ । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, यो एउटा साभेदारीको मोडेलका बारेमा नयाँ ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । नीजि बिद्यालय सरकारीमा गाभिए पछी अब कसरी अघि बढ्छौ ? मन्त्री पोखरेलले प्रश्न गर्नुभयो ः पहिले भन्दा झनैं दुरअवस्थामा पुग्छौं कि उत्कृष्ट बनाउछौं ?
नेपालको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार निम्ताउने प्रणाली मात्रैं भएको बताउँदैं मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर शिक्षालाई रोजगारी संग जोड्नु पर्ने बताउनुभयो ।